जनताले श्री ५ महाराजलाई त फाले, अब श्री ७ लाई पनि फाल्छन् : डा. केसी | NayaMedia
शनि, पुस २५, २०७७ (January 9, 2021, 2:44 pm) मा प्रकाशित
चिकित्सक तथा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली ‘श्री ७’ महाराजको जस्तो भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा माइतीघरमा शनिबार आयोजित विरोधसभामा डा. केसीले राजालाई फाल्ने जनताले ओलीलाई पनि फाल्ने बताए ।
‘ओलीको व्यवहार श्री ७ महाराजको जस्तो भएको छ । जनताले श्री ५ महाराजलाई त फाले अब श्री ७ महाराजलाई पनि फाल्छन्,’ डा. केसीले थपे, ‘सत्ताको उन्मादमा रहेको ओली सरकारलाई दण्डित गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु जनताको कर्तव्य हो ।’
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको र त्यहाँबाट ओलीको कदमलाई रोक्ने आश रहेको डा. केसीले बताए । ‘अदालतले संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने आस गरेका छौं,’ उनले भने । संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध न्यायालयले फैसला नदिने हो भने ओलीको कदम विरुद्ध आएका जनता सर्वोच्च विरुद्ध लाग्ने खतरा हुने र न्यायालयमाथिको विश्वासमा कमी आउने केसीको भनाइ थियो ।
५ महाराजलाई त फाले ७ लाई पनि फाल्छन् डा. केसी
शनि, पुस २५, २०७७ (January 9, 2021, 2:44 pm) मा Naya Media द्वारा मुख्य समाचार अन्तर्गत प्रकाशित